Eyona ndawo intle yeStaten Island 1 bd 2 ba condo YOKUHLAZIYA ngePaki kunye nokufikelela ngokulula kwi-NYC
Real Estate Listings: » Real Estate Agent Directory » Property Managers » US » New York » New York City » Eyona ndawo intle yeStaten Island 1 bd 2 ba condo YOKUHLAZIYA ngePaki kunye nokufikelela ngokulula kwi-NYC1
United States, New York, New York City, 10301
ipapashiwe 7 months ago
Indawo yewebhu:: https://www.wernewyork.com/Agent/27420/Ivan-Cardona?agentId=27420&sortOrder=Price&sortAsc=false
Ikhowudi yeposi: 10301
Uza kuyithanda le ndawo inomtsalane, igumbi elinye kwigumbi lokulala encinci eliphakamileyo ngombono omangalisayo wesakhiwo saseNew York kunye neVerrazano Narrows Bridge. Eli gumbi lokulala li-1, igumbi lokuhlambela eliyi-1.5 lendlu ephezulu enamagumbi amatsha asetyenziswayo, ikhitshi elitsha kunye namagumbi okuhlamba amatsha liya kukunika indawo engaphezulu kwe-1,100 yeenyawo zesithuba esinokuhambahamba (ngaphandle kokuphulukana naloo ndawo intle, umoya opholileyo xa ilixesha lokuba uhlangane ngebhalkhoni yobuqu incwadi elungileyo). Vuka ntsasa nganye uye kumangalisi ilanga elimangalisayo kwaye uzikhuphele uyokulala busuku ngabunye kunye nokuzola kwezandi zendalo. Ihleli kwindawo enobuntu kwindawo enobuhlobo nenkqubo yesikolo ephumelele amabhaso ngaphandle kweManhattan County, nje yimizuzu engamashumi amabini anesihlanu ukusuka kwisiXeko saseNew York. Igumbi liza kunye nendawo yokupaka. Ifumaneka kwindawo yokuhamba yoluntu enomgama wokuhambahamba ukuya eBayou, Enoteca Maria, Indlu yeeWayini, iMyuziyam yeSizwe yeLightouse, iPronto Pizza, iGingos, iHip Shoppe, iKills Boro Brewing Company, iVinum Wire Bar & Cafe, Indawo yokutyela yase-Itali yase-78, e-CRUNCH-Staten Isiqithi, iStaten URBY, kunye neLakruwana. Le ndawo yokuqeshisa ifumaneka kuphela kumqeshi osebenza ngoku. Yiyeke ukufunda kwaye uqalise ukutsala umnxeba. Ixesha elincinci kuphela akukho ntlawulo yeBroker. Akukho ntlawulo yerente. Olu luhlu luqhutywa ngoncedo lwe-R New York, Sitsalele umnxeba namhlanje.
[email protected] Veza
Ibhaliswe kwi 27. Oct 2019
Nxibelelana nentengiso 646-338-xxxx
Khetha udidiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Condos Townhouses Villas Homes Foreclosed HomesLand lots Agricultural Land Industrial LandCommercial Real Estate Office spaces Business Premises Buildings of free appointmentAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Photography ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Brokers Property Managers
Ibhaliswe kwi October 27, 2019
80 Bay Street Landing
Amaxabiso eMarike akhoyo:
Eyona ndawo intle yeStaten Island, NYC - 1 Bd 2 Ba Condo YOKUHLAZIYA ngePaki nange ...
&nbspNew York City in New York (United States), 10301